बैंक फाईनान्स Archives - TV Annapurna
Category: बैंक फाईनान्स
एनआईसी एशिया बैंकको भिसा कार्ड प्रयोग गर्दा १० प्रतिशत नगद फिर्ता
February 2, 2018 February 2, 2018 TV-Annapurna
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रदायक कम्पनी भिसासँगको सहकार्यमा यस बैंकको भिसा डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरि नेपालभित्रको कुनैपनि पस मेशिन मार्फत सामान वा सुविधा खरिद गर्दा क्यास ब्याक (नगद फिर्ता) हुने योजना ल्याएको छ । बैंकले फेब्रुअरीदेखि अप्रिलसम्म तीन महिनाको लागि यो योजना ल्याएको हो । यस योजना अन्तर्गत यस बैंकको भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले प्रत्येक महिना कार्डबाट गरिने पहिलो तीनवटा भुक्तानीमा १० प्रतिशत वा प्रति भुक्तानी रु ५०० सम्मको नगद फिर्ता प्राप्त गर्नेछन् । यस योजनाबाट बैंकको भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने २ लाख ४० हजारभन्दा…
बैंक फाईनान्सLeaveacomment
झापामा एनआईसी एशिया बैंकका एकैदिन २ शाखाको उद्घाटन
January 23, 2018 Annapurna TV
शर्मिला सुवेदी। एन आई सी एशिया बैंकले झापामा २ नयाँ शाखाहरु शुभारम्भ गरेको छ । सोमबार एक कार्यक्रमसहित बैंकले झापाको काकरभिट्टा र मेचिनगर नगरपालिकामा नयाँ शाखाको औपचारिक उद्घाटन गरेको हो । मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर विमल आचार्यले शाखाको उद्घाटन गदै बैकिङ सेवाको पहुँचलाई अझै बृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंकका रुपमा स्थापित एनआईसी एशिया बैंकका हाल १ सय ५७ शाखा, १ सय ४६ एटिएम र ४ एक्स्टे्रन्सन काउन्टरमार्फत ग्राहकलाई सेवा प्रदान गदैं आएको छ ।
अर्थ / वाणिज्य, बैंक फाईनान्सLeaveacomment
एनआईसी एशिया बैंकले सुरु गर्यो भाइबर बैंकिङ सेवा, हेर्नुस कसरी प्रयोग गर्ने ?
एनआईसी एशिया बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुको सुबिधालाई मध्यनजर गर्दै भाइबर बैकिङ्ग सेवा संचालन गरेको छ । उक्त भाइबर बैकिङ्ग सेवा ग्राहकहरुले सहज रुपमा आफ्नो मोबाइल, ल्यापटप, ट्याबलेट, कम्प्युटर लगायतबाट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । कसरी प्रयोग गर्ने ? भाईबर बैकिङ्ग सुबिधा लिनको लागि भाइबर एप्लिकेसनमार्फत एनआईसी एशिया बैंकको पब्लिक एकाउन्टलाई सब्सक्राइब गरी यसबाट आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछन् । भाइबर बैकिङ्ग सेवा मार्फत ग्राहकहरुले एनआईसी एशिया बैंकको शाखा कार्यालयहरु तथा एटिएम संञ्जालहरुबारे जानकारी, Loan Eligibility Checking, अनलाइन खाता खोल्न, बैकिङ्ग समय सम्बन्धि जानकारी, बिदेशी बिनिमयदर सम्बन्धि जानकारी, व्याजदर सम्बन्धि जानकारी एवं बैंक सम्बन्धि…
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरमा जाने
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरमा जाने भएका छन । वाणिज्य बैंकसँग गाभिने औपचारिक निर्णय लिन एनआईडीसीले माघ १९ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ ।एक बराबर एक सेयर स्वापको समान हैसियतमा गाभिने भएका छन् । दुबै बैंकको सम्पति तथा दायित्व मूल्याङ्कनबाट समान सेयर स्वाप रेसियो तय भएको हो । सेयर आदनप्रदान अनुपातमा मर्जरमा असन्तुष्ट लगानीकर्तालाई कम्पनी ऐनको दफा १७७ को उपदफा ७ अनुसार एनआईडीसीले सम्पत्ति तथा जायजेथा मूल्याङ्कनअनुसार कायम भएको मूल्य प्रतिकित्ता ४ हजार ४८४ रुपैयाँ ३० पैसाका दरले फिर्ता दिने प्रस्ताव विशेष साधारण सभामा गरेको छ ।…
नेपालमा एक रुपैयाँ छाप्न २ रुपैयाँ खर्चिन्छ , पैसा भन्दा छपाई महंगो
January 9, 2018 Annapurna TV
एक रुपैयाँको सिक्का छाप्नको लागि डेढ रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर यसको तुलनामा दुई रुपैयाँको नोट छाप्न भने केहि सस्तो पर्ने बताईएको छ । त्यस्तै नोट छाप्दा सानो नोटको भन्दा ठुलो नोटको लागत बढी पर्छ । ठुलो नोटमा ‘सेक्युरिटी फिचर्स’ बढी हुने गरेका कारण यसलाई छाप्नको लागि लागत बढी लाग्ने स्रोतको भनाई छ । सन् २०१३ पछि राष्ट्र बैंकले सन् २०१६ मा मात्रै नयाँ नोट छापेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार, एक हजार रुपैयाँको एउटा नोट छाप्न १ रुपैयाँ ९० पैसा खर्च भएको थियो भने पाँच सयको नोट…
एनआईसी एशियाको दुई नयाँ शाखा आँबु खैरेनी र हरमटारीमा
January 9, 2018 January 9, 2018 Annapurna TV
एनआईसी एशिया बैङकले आफ्ना दुई नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले तनहुँको आबुखैरेनी र गोरखाको हरमटारीमा सोमबारबाट सेवा सुचारु गरेको हो । उल्लेखित २ शाखा कार्यालयहरुको उद्घाटन सँगै हाल यस बैंकका नेपालभर १५६ शाखा कार्यालयहरु तथा १४१ एटिएम रहेका छन । साथै ४ एक्स्टेन्सन काउन्टरहरुबाट ग्राहकहरुलाइ सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । बैंकले हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित अन्य विभिन्न स्थानहरुमा चाँडै नै थप शाखा संचालन गर्ने योजना अगाडि सारेको जानकारी दिएको छ । शाखा सञ्जाल, पूँजी संरचना, वासलातको आकार, ग्राहक संख्याहरुको आधारमा बैंक…
बैंकहरुमा ऋण दिने रकम पनि अभाव, अब के गर्लान्?
December 28, 2017 January 5, 2018 Annapurna TV
मुुलुकभरका वाणिज्य बैंकहरुमा ऋण दिने पैसा ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र छ । भखैरै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पुरानो कम्पनी टेलिया सोनेरालाई आफ्नो नाफा विदेश लैजान अनुमति दिएको छ । स्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार नेपाली बैंकहरुमा रहेको यो रकम ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । अर्कोतिर यही महिना उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम कर तिर्दैछन् । केही कम्पनीहरु चाँडैै सेयर निष्कासनको तयारीमा छन् ।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।
बैंकहरुको कर्जा रोक्ने तयारी, कारण यस्तो छ
December 26, 2017 January 5, 2018 Annapurna TV
तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले कर्जा रोक्ने तयारी गरेका छन्। तरलता अभाव थप चर्कंन नदिन कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बैंकरले बताएका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले तत्कालका लागि कर्जा रोक्नुको विकल्प नभएको बताए। ‘तरलता अभावका कारण निक्षेपको ब्याज बढाएर महँगो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने वाध्यतामा हामी छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्नुभन्दा बैंकले प्रतिबद्धता गरे बाहेक नयाँ कर्जा रोक्नुपर्छ। हामी नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं।’। ब्याज बढाएर निक्षेप आकर्षण गर्नुभन्दा कर्जा प्रवाह रोक्नु राम्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा बैंक पुगेका छन् । बैंकले कर्जा प्रवाहमा रोक लगाए आर्थिक गतिविधिमा संकुचन…
December 25, 2017 January 5, 2018 Annapurna TV
कात्तिकमा वस्तु र सेवा दुवै समूहको मूल्य वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो चौमासको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै कात्तिक महिनामा मूल्य वृद्धि उकालो लागेको जनाएको हो। असोजमा तीन दशमलव एक प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि कात्तिकमा आइपुग्दा तीन दशमलव नौ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मूल्यवृद्धि चार दशमलव आठ प्रतिशत थियो। २०७२ को कात्तिकमा भूकम्प र नाका बन्दीको कारण मूल्य वृद्धि १०.४ प्रतिशत पुगेको थियो। दुई वर्ष अघिको मूल्यका आधारमा यस वर्ष वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटे पनि यस वर्षको पहिलो चार महिनामा भएको…